တစ်ဦးကဂိုဒေါင်အရောင်း Survival လမ်းညွှန်
ဂိုဒေါင်အရောင်း Survival လမ်းညွှန်
by အီဗလီန် Reid
02 ၏ 01
ဂိုဒေါင်ရောင်းရန်စျေးဝယ်၏အနုပညာ (ထိုသိပ္ပံ): အပိုင်း 1
ဂိုဒေါင်ရောင်းအားအံ့သြဖွယ်ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအရွားလှ gawd ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ။ Flickr ကိုအသုံးပြုသူ indie138 နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ
ဂိုဒေါင်ရောင်းအား ။ ရုံဟူသောဝေါဟာရကိုစျေးပေါအသံနိုင်ပါတယ်။ ထိုရောင်းအားမှာစျေးနှုန်းများအလွန်စျေးပေါသောဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်စျေးဝယ် sleuth $ 40 သို့မဟုတ်လျော့နည်းဘို့အလှမယ်နှစ်ခြောက်ဆယ်ဂျင်းဘောင်းဘီ, $ 30 ကိုဂန္ဖြတ်ဒီဇိုင်နာသားရေဘွတ်ဖိနပ်များသောအားဖြင့် $ 300 အဘို့အ retailing, $ 10- များအတွက် cashmere ထိပ်တန်း -think ဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများစျေးပေါပေမယ့်ဘာမှဖြစ်ကြသည်။
ကိုယ့်တဦးတည်းအရာရှိတယ်။ ဂိုဒေါင်ရောင်းအားဟာရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကလူစည်ကားနေရွေးချယ်ခြင်းလွှမ်းမိုးသောနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သင့်နောက်ကျောကိုထုတ်ဝတ်စေခြင်းငှါ, ရာနာရီအဝတ်အစား၏လိပ်ခေါင်းအပေါ်သို့လိပ်ခေါင်းသယ်ဆောင်ရန်ပြင်ဆင် nil, ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး, ကလမ်းကြောင်းသစ်ပေါ်ဘာထွက်ရှာဖွေမှကြွလာသောအခါသင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာဆိုရင် အဝတ်ကိုအတော်လေးအပေါ်ဖမ်းမိဘယ်တော့မှအရာယခင်ရာသီများနှင့်အင်္ဂါရပ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထဲကနေဖြစ်နိုင်သည်ကတည်းကတစ်ပန်းကန်အဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းအဖြစ်ပိုကောင်းအသုံးပြုမယ့်အဘယ်အရာကိုနှိုင်းယှဉ်။ ထို့ကြောင့်ယင်းသိုလှော။
ဂိုဒေါင်ရောင်းချရန်အပျိုကညာမှမှတ်ချက်? သင်သည်သင်၏လောက်မရှိတဲ့လျှော့ခများအတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ရရှိပါသည်။ သို့သော်စျေးဝယ်အိပ်မက်ဆိုးများစေလျော့ပါးစေရန်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ သင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်မည်ဟုငါ 8-ခြေလှမ်းရှင်သန်မှုလမ်းညွှန် Follow နှင့်သင်ရုံဂိုဒေါင်တစ်ခုရောင်းချ junkie ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။
အရာကိုဖြစ်နိုင်သမျှအတိုင်း, ရောင်းချ၏ပထမနေ့၌ရှိရပါတယ်။ လက်ရှိတွင်စုံလငျကမ်ဘာပျေါတှငျနေထိုင်လျှင်, ရောင်းချ၏ပထမတစ်နာရီအတွင်းရှိရပါတယ်။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးနေ့လည်စာအချိန်မတိုင်မီ 9-To-5ers ၏လှိုင်းကိုတက်ပြသသည့်အခါ။ သင်တို့ပြုလျှင်အကောင်းဆုံးအပိုင်းပိုင်းဂိုးသွင်းဖို့ပိုဖွယ်ရှိပါတယ်။ သငျသညျနောက်ဆုံးနေ့တွင်သွားလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, အချို့ကိုသင်ရောင်းအားအရာအားလုံး--go ရမယ် mode သို့ get အဖြစ်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဂိုးသွင်းဖို့ပိုဖွယ်ရှိပါတယ်။
ယခု 2. ဣနြေ္ဒ။
သငျသညျ Winners မှာ hodge podge ထိန်သိမ်းမှတဆင့် sifting တစ်နာကျင်မှုသည်ထင်နေလျှင်မကြာခဏထပ်နှင့်အတူယေဘုယျအရွယ်အစားအားဖြင့် "ခွဲထားခဲ့သည်" ဘာပဲ, သင်ဂိုဒေါင်ရောင်းချတွေ့ကြုံခံစားသည်တိုင်အောင်, စောင့်ဆိုင်းနှင့်၎င်း၏လိပ်ခေါင်း, ထိပ်၏ထု, ဂျင်းဘောင်းဘီ။ မဟုတ်ကိုအမြဲတစ်စုံအားဖြင့်သော်လည်းဒါမှမဟုတ်ဖိနပ်အပိုင်းကိုလည်း, အရွယ်အစားအားဖြင့် "ခွဲထားခဲ့သည်" ။ ဒါဟာရှုပ်ထွေးပါတယ်။ ထိုအက၏အဓိပ္ပာယ်အောင်သင်မှတက်ပါတယ်။ ဒါဟာစနစ်တကျပိုကြီး, Multi-အမှတ်တံဆိပ်ရောင်းချဖြစ်ရပ်များ, လက်လီ markup အထဲကဖြတ်တောက်ဘို့ဆပ်ဖို့သေးငယ်တဲ့စျေးနှုန်းမှာသင့်ရဲ့ sartorial ရွေးချယ်စရာစူးစမ်းဖို့နာရီကြာနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါနေ့စဉ်ကမ်ဘာပျေါတှငျ, သည်းခံခြင်းတစ်ဦးသီလဖြစ်ပါတယ်။ ဂိုဒေါင်တစ်ခုရောင်းချမှာ? ဒါဟာသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါပဲ။
အငြိမ့် 3. Dress ။
ငါသည်သင်တို့ကိုအဝတ်တောင်ပို့ဆုပ်ကိုင်သင့်ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်နာရီဖြုန်းပါလိမ့်မယ်ဖော်ပြထားခြင်းခဲ့သလား ဒါ့အပြင်အပေါငျးတို့သအပိုင်းပိုင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုလက်ျာဘက်မထိုက်မတန်ကိုရှာဖွေအပေါ်ကြိုးစားရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, ကဖယ်ရှားကျော်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပေါ်ပြန်ထားရန်လွယ်ကူကြောင်းတစ်ခု ensemble အတွက်ဆေးထည့်စဉ်းစားရန်ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆရဲ့စဉ်းစားပါ။ အဆိုပါဖိနပ်တွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့အိတ်ထဲမှာဒေါက်ဖိနပ်တစ်ဦးအလင်း pair တစုံယူလာပါ။
4. မုယူလာပါ။ နှင့်ရေ။
နာရီ။ ခြေထောက်ပေါ်။ ဆုပ်ကိုင်အထည်။ တဖန်သင်တို့ 10 ယခု3နာရီအထိဖွင့်ဖြစ်၏ကတည်းကရှိခဲ့ပါတယ်
5. အိမ်မှာမီးဖိုချောင်စုပ်ထားပါ။ သေးငယ်တဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ယူလာပါ။
ဒီလိုအိတ်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပေါ့။ ဒါကြောင့်သင်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်မရယနေ့။ သင်တို့အပေါ်မှာကြိုးစားရန်အဝတ်များပေါင်ကိုသယ်ဆောင်ဖို့အားလုံးကိုသင်၏အစွမ်းသတ္တိလိုအပ်ပါတယ်။ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန်။ အသုတ်အပြီးအသုတ်အပြီးပွဲစဉ်။ သင်ပြန်လာတဲ့အခါဖွယ်ရှိရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကတွေ့ရှိခဲ့ကိုမဆိုပုံသို့မဟုတ်ထိန်သိမ်းအတွက်အလားအလာပင်အရိပ်အမြွက်နှင့်အတူတစ်ခုခုစွန့်ခွာလို့မရပါဘူး။
02 ၏ 02
ဂိုဒေါင်ရောင်းရန်စျေးဝယ်၏အနုပညာ (ထိုသိပ္ပံ): အပိုင်း 2
ဂိုဒေါင်ရောင်းအားတက်ရောက်ခြင်းသည်းခံခြင်းလိုအပ်သည်။ နှင့်ခိုင်ခံ့သောလက်နက်။ Flickr ကိုအသုံးပြုသူ lulemon athletica နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ
ဒါက ascot, နှီး crotch အပန်းဖြေဝတ်စုံနှင့် batwing ပိုးအင်္ကျီယနေ့ "ပူ" အော်ဟစ်စေခြင်းငှါလည်စည်း-ဆိုးဆေးအသုံးပြုပေမယ့်ဂိုဒေါင်တစ်ခုရောင်းချမှာရောင်းချလျက်ရှိရဲ့လျှင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုများမှာ, ထို့နောက်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လမ်းကြောင်းသစ်င်း၏လမ်းထွက်ပေါ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကအဘယ်သူမျှမအဘို့အပြည့်အဝစျေးနှုန်း paid အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည့်ပထမဦးဆုံးသောနေရာ, ထွက်အလုပ်လုပ်ကြဘူး "ကြည့်။ " ဒါကြောင့်သင်ဖက်ရှင်ဥပမာဦးတည်သည်အဘယ်မှာရှိသင် "ကြိုတင်ခန့်မှန်း" နိုငျဘယ်လောက်ဝေးရှေ့ဆက်အံ့အားသင့်ဖြစ်င့် (အပြီးစစ်တပ်ပြန်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းယခုရာသီ, လာမယ့်ရာသီနှင့်ရာသီအဘို့တွန်းအားပေးဘာပေါ်တွင်သင်၏သွေးခုန်နှုန်းရရှိပါသည်မဟုတ်လျှင် ဒီကျဆုံးခြင်း ... shocker) ၌၎င်း, သင်အသိပညာနှင့်အတူကြံဖန်နိုင်ပါတယ်, ထို့နောက်သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးအလောင်းအစားနက်လျှော့စျေးရောင်းချမှုမှာအခြေခံတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Camisoles, t-ရှပ်အင်္ကျီ, မာရိ Jane, unadorned ပန့်များ, မှောင်မိုက်လက်ဆေးဂျင်းဘောင်းဘီ, စံ cardigans, အနက်ရောင်လျှော့, ဂန္အိမ်မှဆင်မြန်း, ယလေ့ကျင့်ခန်းအဝတ်, Chino, ပိုလိုရှပ်အင်္ကျီ, running ဖိနပ်, ဘဲလေးတိုက်ခန်း, v-လည်ပင်းရိုးရှင်းအင်္ကျီလက်နှင့်အစိုင်အခဲအရောင်များ အားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံကစားနည်းဖြစ်ကြသည်။
Expec ဖူးတဲ့သင့်ကိုယ်ပိုင်ပုဂ္ဂလိကပြောင်းလဲအခန်းထဲမှာ? ကြောင်းနှင့်အတူဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တစ်ပွင့်လင်းဘား? ဂိုဒေါင်ရောင်းအားယေဘုယျအားဖြင့်လက်လီစတိုးဆိုင်နေရာထိုင်ခင်းပူဇော်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့အောက်ဆုံး-of-the-အံဆွဲ skivvies, သင်သိ, သင်-Know-ရှိရာ, အိမ်မှာအပေါက်နှင့်အတူတဦးတည်းထွက်ခွာစဉ်းစားပါ။ အဲဒီအစားသင်နှင့်အတူတူပင်ကျား, မသငျ့သူချင်းစျေးဝယ်သင့်ရဲ့သက်ဆိုင်ရာလိပ်ခေါင်းပေါ်မှာကြိုးစားနိုင်ရှိရာကုလားကာနှင့်တကွပယ် quartered အခန်း, ဒါမှမဟုတ်အပိုင်း, မျှော်လင့်ထား။ အတူတူ။ တစ်ဦးအားကစားရုံ Locker အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာလိုပဲ။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီ setup ကိုပိုနှစ်သက်ခြင်းငှါလာကြပါတယ်။ ငါအမျိုးသမီးတွေအခန်းထဲမှာရှိပါတယ်သကဲ့သို့အများအပြားဒုတိယထင်မြင်ချက်များရယာယီညီအစ်မပြိုးထောငျနိုငျသညျ။ ပြီးပြည့်စုံသောသူစိမ်းအတူ။ ငါထံသို့ သွား. နောက်ဆုံးဂိုဒေါင်ရောင်းချမှု "ငါသည်ဤသည်၌ဒီတော့အဆီကိုကြည့်, ငါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်" ဆင်းလှသောအစ်မ, curvacious အလောင်းနှင့်အတူအမျိုးသမီးကိုပြုတတ်ကြ၏, "Oh ပျားရည် reply ငါ့ cue, သင်သည်ထိုအဝတ်အစားခပ်နွမ်းနွမ်းထက်ပိုကောင်းထိုက်သည့်ရံဖန်ရံခါနှင့်အတူစီရင်ခံခဲ့ရသည်။ "အဝတ်အစားကိုမအပြန်အလှန်အမေရိကန် fit စေရပါမည်။ အဝတ်အစားတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းသင်ကိုယ်တိုင်, ထို့နောက်ထုတ်လုပ်သူဒဏ်ခတ်, သင့်တင်းပါးအဆီသို့မဟုတ်အပြားမဟုတ်အောင်လျှင်!
ငါ blowout ရောင်းအားငါ၏မျှတသောဝေစုမှဖြစ်ပါတယ်။ ငါကျူးကျော်အနိုင်နိုင်ကျော်ပါရှိသောတိုက်ပွဲတွေလည်းအတူပထမဦးဆုံးရှိခဲ့သည်သူကိုကျော် lineup အတွက်ပေါ်ထွက်လာမြင်ကြပါတယ်။ ဒါဟာတသမတ်တည်းအမှတ်ဘာ ... အံ့သြငါ့ကိုအရွက် ?! ကျွန်မအဝတ်အစားတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းအပေါ်ဘက်မှာစစ်တိုက်သို့မဟုတ်ဂိုဒေါင်ရောင်းချမှာငါ့အလမ်းထဲကတစ်စုံတစ်ဦးကိုတွန်းဖွင့်မပြောနိုင်ပါဘူး။ ငါတကယ်မယ့်အဝတ်အစားကိုအုပ်စိုးအနက်ရောင်မျက်စိချင်ပါသလား ဒါပေမယ့်ငါကငါ့အပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်စေခြင်းငှါ, ထင်သူတစ်ဦးစျေးကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီဇိုင်နာအပိုင်းအစအပေါ်ကြိုးစားရန်အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးတစ်ချိန်တည်းမှာကမှာ lunged သည့်အခါသူမသည်အစောပိုင်းကထဲကအကြှနျုပျကိုအောကျမေ့နဲ့ကျွန်မသူမ၏အပြုံးတစ်ခုနှင့်အတူစားဆင်ယင်မှုအတွက်သွားကြကုန်အံ့။ ဟေ့, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူမတကယ်လှပသောဝတ်စုံလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူမပင်တဦးတည်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘုရားသခငျသညျငါရှေ့မှာရောက်ခဲ့ဖူးသိတယ်။ သင်ဘယ်လိုကြောင့်ပင်ခွင့်ပြုဘို့ထိုကဲ့သို့သောအခွင့်ထူးယူသောသူသည်သင်၏ပျမ်းမျှအားပထမဦးဆုံးအ worlder ရန်ဂါဝန်ပိုင်ဆိုင်မခံစားရဘယ်လောက်ရှက်စရာထပ်ဆင့်လွှင်သလဲ? ကြောင်းမှောင်မိုက်အရပ်၌ရောက်ခဲ့ဖူးသောသူကိုသာသူမြားကိုသင်ခံစားမိပါစေဘယ်လိုအနိမ့်နားလညျနိုငျတူသောဒါဟာပုံရသည်။ နောက်ကျောကဒီအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ ဒီတော့ကံကြမ္မာငါ relinquished ်စားဆင်ယင်သူမဘာလုပ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူမ၏ fit မပြုလုပ်ခဲ့? သူမသည်ငါ့ကိုဆီသို့ဦးတည်နေတဲ့ beeline လုပ်. ငါကအပေါ်ကွိုးစားချင်ပါတယ်လျှင်ငါ့ကိုမေးတယ်။ ဒါဟာဿုံ fit! ငါတစ်စုံတစ်ဦးကအခြားသူရဲ့အကျိုးအတွက်စွန့်စားဆင်ယင်ပိုင်ခွင့်ကိုပြန်ငါ့ဆီသို့ရောက် လာ. ။ ထိုအခါငါကဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမတိုက်ပွဲတွေလည်းမရှိထိပ်တိုက်, သနားကရုဏာနဲ့ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု့သဘောမျိုး။ ပိုများသောမကြာသေးမီကကျွန်မသူတို့မောကြည့်ရှုဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကတက်ကိုင်ခဲ့ကြပုံကိုမေးမွနျးတဲ့အခါမှာထဲကအကြှနျုပျကိုအောကျမေ့သောသူ On-site ကိုအမှုထမ်း, ငါသည်နေရာချထားနိုင်ဘူးဇိမ်ခံဖိနပ်တရံ၏ဒုတိယတစ်ဝက်ကိုရှာဖွေငါ့ကိုကူညီပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့လမ်းထဲကကိုသွားဖူး ဒါသူတို့ရဲ့အလုပ်မဟုတ်ခဲ့သော်လည်း, သေတ္တာများ၏ပရမ်းပတာ၌တည်၏။ ငါ၏အနှိမ့်ချအတှေ့အကွုံမှာတော့ကောင်းတဲ့ဖြစ်ခြင်းဂိုဒေါင်ရောင်းအားမှာလုပ်ဖို့ပဲအရပ်ဘက်အရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာချွတ်ချေ။
Montreal ဂီတပွဲ: ဇွန်လ 2017-ကြည့်ရှုပါရှိရမည် Live Show
ထိပ်တန်း Montreal ပြတိုက်
အဆိုပါ Montreal ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်မှာအလည်အပတ်လိပ်ပြာ Go ကိုအခမဲ့
Montreal ဂျက်ဇ်ဂီတပွဲတော်: ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး + အကောင်းဆုံးဂျက်ဇ်ဂီတပွဲတော်တွင်, တိုင်းနွေရာသီ
ဟူစတန်ရဲ့ Quirkiest ဆွဲဆောင်မှုများ
Busch ဥယျာဉ် '' SheiKra နှင့် Griffon Coaster: ရေငုပ်၏အဘယျတဲ့လင်မယား
အစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးက New York City, Stores
ဗေသနိရွာဓါတ်ပုံများ - ဝဲရဲ့ဗေသနိရွာကမ်းခြေ
သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များအဘို့အသိုလှောင်၏ညာဘက်ငွေပမာဏနှင့်အတူတစ် RV ဝယ်ယူဘို့သိကောင်းစရာများ
အဘယ်မှာရှိ Downtown စိန့်လူးဝစ်အတွက် Busch အားကစားကွင်းအနီးပန်းခြံမှ
Bethesda စာပေပွဲတော် 2017
PGA ဂေါက်ကလပ်ကိုသင် Play မှဆိုးဆေး-Ing ဖူးသင်တန်းအမှတ်စဥ်ရှိထားသည်
Long Island, နယူးယော့အပေါ်ကလေးများအဘို့အမိုးလုံလေလုံလှုပ်ရှားမှုများ